Kozlov Maksim Evgenevich, Russian umpristi Orthodox: Biography nesithombe
Archpriest Maxim Kozlov, ogama biography kuchazwa kulesi sihloko, eyaziwayo emibuthanweni isonto eRussia. Ngaphezu imisebenzi yakhe engumpristi, Uyabahola ukwenza umsebenzi kwezemfundo, kodwa nayo inethonya ezithile on ukuthuthukisa izinqubo zenkolo e-Russian Federation.
Youth kanye Nemfundo
I hero lesi sihloko wazalwa amabili nanhlanu kuNtulikazi 1963 enhlokodolobha yase-Union of Soviet Socialist Republics. Kozlov Maksim wakhulela emndenini, kude inkolo futhi isonto, abazali bakhe kwakunguMariya abangakholelwa kuNkulunkulu banesithakazelo iziphethe kahle. Ngaphezu kwalokho, egcekeni kwaba zezimbali eSoviet Union, futhi inzalo abangekho bakhuthazwa ukuba inkolo. Kodwa Max wazizwa ukhangwa kuNkulunkulu, ngisho esemncane ekuseni. Njengoba umfana oneminyaka engu-nanhlanu, wabhapathizwa, yini akazange ukwazisa izihlobo zabo ukuthi kungenzeka babengeke baqonde futhi akazange ayisekele. Ngakho waya esontweni ekusithekeni iminyaka eminingi, benethemba lokuthola waba umpristi. UNkulunkulu uyaluvuza labo ivame ukuba ke ngenhliziyo eqotho - iphupho ukuza Maxim kweqiniso.
Ngemva kokuqeda esikoleni, le nsizwa wangena eMoscow State University Faculty of kolimi, lapho afundela khona Latin nezilimi ngesiGreki. Kodwa mayelana ubizo lakhe, okuyinto wazizwa ngiseyingane, Angizange ngiwukhohlwe. Njengoba umfundi, Kozlov Maksim zaqala ezizimele kanye eMoscow Sabefundisi. Okungukuthi, wayenikeza abantu izinkonzo ukuhumusha kusuka ngesiGreki, wasebenza ezazikhona nemibhalo yesandla ubudala, watadisha cindezela isonto Greece nokunye. E. Esikhathini umnyango ukushicilela.
Ngemva kokuthola iziqu ngo-1985, insizwa ethile kakade ngqo uya emgomweni wakhe, akekho lifihle, wangena sobufundisi eMoscow. Watadisha njengenhlangano umfundi zangaphandle, ngakho kakade ukhiphe ngemva kweminyaka emithathu. Njalo wahle wangena enhlokodolobha Theological Academy, okuyilona elisebenzayo futhi ngaphandle iziqu 90-m, ngezinga emfundisweni ikhandidethi.
zesifundo, nokufundisa zemfundo
Ngokushesha ngemva sabefundisi Kozlov Maksim Evgenevich waqala umsebenzi wakhe. Ngesikhathi eneminyaka engamashumi amabili nambili it asithathe sokuba umfundisi isiJalimane, isi-Latin nesiGreki. Izinkulumo ukufunda njengoba umfundi esikoleni sabefundisi naseminyakeni Academy. Kamuva Kozlov wabuye wafundisa izifundo umlando izinkolo Western, imfundiso ukuqhathanisa kanye mpendulo.
Ngo-1991, uthisha osemusha kwaholela ikhomishana philological at Moscow Theological Academy kanye Seminary, futhi cishe ngesikhathi esifanayo kwaba likaprofesa. Wayesebenza ngentshiseko nangomphefumulo, ubekhona emkhakheni zenkolo, njalo iqhaza emicimbini ehlukene kwezesayensi futhi zenkolo. Ndawonye nozakwethu Kozlov Maksim isungule isici esisha semfundo engokomoya, ukuhlelwa iqoqo "Theological Emikhulu Kakhulu 'agcinwe kule Synodal Theological Commission, nokunye. D.
Ngo-2002 wamiswa njengephayona elivamile iPhini likaSihlalo wekomidi academic Lobu-Orthodox LaseRussia. Ube engumlobi njalo umhloli lapha. Ngemva kweminyaka emine, Maxim E. waba uprofesa MDA.
Ngo-2010, unyaka Kozlov wayeyilungu le khomishana, omunye eyayikhuluma budlelwane emkhatsini wetincenye Church kanye nabezindaba, kanye nezinye - isimo sengqondo Orthodox kwezinye izinkolo. Ngaphandle kokufundisa esikoleni sabefundisi naseminyakeni Academy, Kozlov, Maxim izinkathi ezahlukene Yena ozongitshela ngezinye amakolishi orientation zenkolo.
San yakhe Kozlov lokuqala kwabuyela ngo-1992 futhi waba igosa. Isiko ukugcotshwa wenziwa MDAiS Rector obuye-Archbishop Alexander of Dmitrov. Kwakusebusika, futhi ehlobo impunga eMoscow All Russia Alexy II ngayingcwelisa Maksimu Evgenevichu umpristi. Ngesikhathi esifanayo wamiswa umfundisi kwelinye amasonto laseMoscow (Holy Trinity).
Unyaka ayisishiyagalolunye nane umpristi Maxim Kozlov futhi baba. obakhathalelayo. Umphathi ibandla St Tatiana eMoscow State University. Futhi ngemuva kwesikhathi esithile yayisivele Abbot, lokho kwaze kwaba ngo-2012.
Ngonyaka ayisishiyagalolunye nesithupha waba ilungu Synodal Theological Commission. Ngo-2000 wathola isikhundla archpriest. Futhi ngo-2012 wamiswa njengephayona elivamile Umphathi ibandla St uSeraphim of Sarov, okuyinto kukuliphi ehlukile (wayekade ngaphambilini kwakungekaNkulunkulu ethempelini Engcwele Martyr Tatiana) ahlukanisa. Kozlov lapha ukhonza kuze kube yilolu suku. Kusukela ngo-April 2014 Maxim E. unelungelo lokugqoka isigqoko.
Ubaba Maxim Kozlov owaziwa hhayi kuphela e-Russia kodwa futhi phesheya. Njengengxenye imfundo waba nethuba ukuvakashela emazweni amaningana. Ngakho, ngo-1996, i-mpristi waya e-United States, lapho ozongitshela ku Russian-Orthodox kanye nemfundiso yenkolo kwekhulu lamashumi amabili esontweni e-New York. Futhi ngo-1999, umyeni wakhe waqeqesha eNetherlands e-Institute for Eastern Studies. Futhi abafundi kanye nothisha zikhunjulwe Maksima Kozlova, njengoba zenkolo ngokujulile futhi sifisa indlela olwazini lwabantu ngezinga.
Wakwazi azibonakalise kumpristi futhi uthisha kanye nesazi intatheli. Yena utlole izincwadi eziningana, kuye kwakhishwa izinguqulo eziningi nezihloko on womlando wesonto, patristics noT D. Kozlova ngokuvamile itholakala emakhasini wabezindaba Russian futhi kumabonakude, lapho ebuza ukuthi inkolo nokuphila esontweni namuhla. Maxim E. eyilungu ibhodi isihloko we lwencwadi "Theological Emikhulu Kakhulu '.
Ukhishwa Unelungelo lokugqoka Gaiters pectoral engu- zinezintambo zobuhlalu, kamilavka futhi Mace. Ngo-2000, Maxim Evgenievich waphakanyiselwa elisezingeni archpriest.
Izindondo futhi oda:
Order of St Macarius eMoscow (idigri wesithathu);
ukuze uDaniyeli eMoscow (idigri wesithathu);
Serafima Sarovskogo oda (idigri wesithathu);
Medal Sergiya Radonezhskogo (kuqala futhi besigaba sesibili);
Medal "Merit" (idigri yesibili);
Prize "Found Generation".
Kozlov Maksim: umndeni umfundisi
ukuphila Siqu Maxim Paton ikakhulukazi neze ikhangiswe, yize akayena 'idla yodwa. Esikwaziyo ukuthi nguye, njengoba kufanele umpristi, umyeni nobaba omuhle. Kozlov nge wakhe nezingane unkosikazi ezine, esibekela isibonelo senkonzo Devotional kuNkulunkulu nabantu.
Convents. Pokrovsky Monastery
Providence - ke ... Umqondo futhi okushiwo eside
"Dlulisa Factor": Izibuyekezo nodokotela abathengi
Edmund Burke: izingcaphuno, amazwi, biography, imibono eziyisisekelo, imibono yezombangazwe, imisebenzi esemqoka, isithombe, ifilosofi
Ifomu yenhlangano kanye wezomthetho izinhlangano ezingokomthetho: ngokubambisana elinganiselwe, ubambiswano jikelele, LLC, ALC, inkampani isitokwe ngokuhlanganyela, abambisana
Umthetho nezidingo, intengo yakhoibrium
Tablets "Urotol": nozakwabo Russian kanye nokubuyekeza ngazo